Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda DIGGING
Bonovo baaldi-baaldi culus oo baaldi ah oo lagu qodayo xaaladaha dhulka ee daran ee dhagaxu ku badan yahay
Bonovo Duty baaldi baaldi leeyihiin muuqaalada: Adag oo raagaya; birta NM400 ama Dharka adag u adkeysata ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo saxanka weyn ee daab, saxanka daabkiisa dhinaca iyo saxanka xoojinta saxanka salka. Taarikada xoojinta, taarikada ilaaliyaha dhinaca, taarikada ilaalinta iyo adabtarada baaldiyo heelan ah oo la qaatay, taas oo si weyn kor ugu qaadeysa adkeysiga balastarka baalasha.
Codsiga: Qoditaanka carrada adag ee burburka adag ama rarka burburka iyo quruuruxa, baaldi dagaal oo xamaasad leh oo lagu rakibo codsiyada aadka u xoqan sida dhagaxa daran. Baaldiyaduhu waxay gaarsiiyaan heer sare oo ah ilaalin dhar xiran oo loogu talagalay nolosha dheer ee codsiyada si adag u xoqan
Bonovo qodista waxqabadka sare baaldi qodista baaldi ee loogu talagalay dhaqaaqa dhulka
Qashin qubka Baabuurka Guud ee Waajibaadka loo adeegsado howlaha waajibaadka fudud sida qodista iyo rarka ama dhulka, ciid, dhagaxan dabacsan iyo quruurux, iwm Awooda weyn, birta qaabdhismeedka xoogga sare leh iyo balaastikada horumarsan ayaa badbaadin karta waqtiga aragtida waxayna kordhin kartaa waxtarka shaqada, Qalabka ikhtiyaariga ah geeska laga heli karo. ka diyaari mashiinka 1 ilaa 80 tan.oo la soosaaray si loogu habeeyo mashiinka martida loo yahay.
Warshadda Bonovo iibinta tooska ah baaldiga dhagaxa weyn ee baaldiga ee qodista dhagax jilicsan
Bonovo Extreme Duty Bucket codsi loogu talagalay raritaanka dhagaxa adag iyo macdanta qarxa ka dib. Waxaa si gaar ah loogu talagalay qodista joogtada ah ee walxaha ugu xoqidda badan, xaaladaha ugu adag. Bonovo Extreme Duty baaldi ayaa loo sameeyay si looga badiyo baaldihii dhagaxa dhaqameed. Baaldiyadahan adag waxay leeyihiin xirmooyinka xirmooyinka ugu dhameystiran uguna cusub ee waligood lagu dhajiyay baaldi.